चितवनमा १६५ जना मानसिक रोगीको समाजमा पुनःस्थापना – Nepaliko Aawaj
चितवनमा १६५ जना मानसिक रोगीको समाजमा पुनःस्थापना
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन ०६, २०७७ | २१:२७:५९
चितवन । मानसिक रोगीको उपचारका लागि स्थापना गरिएको व्यूटीफुल माइन्ड इन्स्टिच्युट अफ साइक्याट्रीले १६५ जनाको उपचार गराएको छ । उपचारपश्चात उनीहरु समाजमा पुनःस्थापित भएको साइक्याट्रीले जनाएको छ । साइक्याट्री दुई वर्षअघि चितवनको खैरहनी ११ गैडाहामा स्थापना गरिएको थियो । साइक्याट्रीका सञ्चालक मनोरोग विशेषज्ञ डा. गिरीराज भन्तनाका अनुसार हाल २५ जना मानसिक रोगीको यहाँ उपचार भइरहेको छ । औषधिको माध्यमबाट मात्र नभई योगा, ध्यान,वैज्ञानिक औषधिबाट समेत बिरामीको उपचार हुने गरेको डाक्टर भन्तनाले बताए । एक जना बिरामीका लागि मासिक ५० हजार रुपैयाँ खर्च लाग्ने गरेको छ । बिरामीको अवस्था हेरी ६ महिनासम्म उपचारसँगै कोर्ष हुने गरेको डा भन्तनाले बताए । उपचार गराएकामध्ये केहीले यहीँ रोजगारीसमेत पाएका छन् ।
उपचार गराएकामध्ये ८ जनाले पूर्व अवस्थामा फर्किएर यही रोजगारी पाएको इन्स्टिच्युट अफ साइक्याट्रीका मनोरोग विशेषज्ञ डा. शैलेन्द्र अधिकारीले बताए । मानसिक रोगीको उपचारका लागि विभिन्न विधिद्वारा उपचार हुने यो नै नेपालको पहिलो अस्पताल रहेको अधिकारीको दाबी छ । झण्डै १२ करोडको लगानी भइसकेको यो अफ साइक्याट्री एक सय शैया क्षमताको छ । साइक्याट्रीमा डाक्टर भन्तना, अधिकारी र डा खगेन्द्र काफ्लेसहित ३ जना डाक्टर, ७ जना नर्स, ६ जना सुरक्षा गार्ड, प्रशासन, भान्छामा ७ जना गरी २३ जना कार्यरत छन् । साइक्याट्रीका प्रवक्ता कमल भुषालका अनुसार इलामदेखि कैलालीसम्मका मानसिक रोगीको यहाँ उपचार भएको छ ।
यसैबीच, व्यूटीफुल माइन्ड इन्स्टिच्युट अफ साइक्याट्रीमा विपी, पुष्प स्मृति वाटिका निर्माण गरिएको छ । विपी कोइरालाको स्मृति दिवसको अवसर पारेर साइक्याट्री परिसरमा स्मृति बाटिका निर्माण गरिएको हो । बाटिकामा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी वृक्षारोपण समेत गरिएको छ । नेपाली कांग्रेस चितवनका पूर्वसभापति कृष्णलाल सापकोटाको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा पूर्वशिक्षा राज्यमन्त्री शेषनाथ अधिकारी, कांग्रेस महासमिति सदस्य सुशीला उप्रेती, उद्योग वाणिज्य महासंघ वागमती प्रदेश सदस्य गुणराज श्रेष्ठलगायतको उपस्थिति रहेको थियो । वृक्षारोपणअघि आयोजित कार्यक्रममा वक्ताहरुले विपीको योगदानको चर्चा गरेका थिए ।